Ukufaka isicabha - inqubo wemfanelo kakhulu, ngoba kuthinta ukuxhashazwa wayo, kanye nokushisa ukwahlukanisa umsindo. Ukuze ukufakwa owawuqondene izinga kanye nokwethembeka, udinga ukwenza kahle izilinganiso nasekhothameni. Izilinganiso benziwe amaphuzu amathathu: kwesokunxele, kwesokudla kanye maphakathi. Ngakho kubalulekile ukuba acabangele squareness nomangali straightness yabo. Ukukhweza umnyango enokwethenjelwa kakhulu, kubalulekile emkhakheni nesilinganiso ukususa ungqimba usimende kumila odongeni. Ungabese uqhubeka Ukudilizwa umnyango ubudala.
Okokuqala off izinkintsho zawo isuswe iqabunga umnyango, bese adiliza ibhokisi uqobo. Kuvamise ezindaweni ezimbalwa kokuba uthathe kalula disassembly. Ngemva kokususa umnyango ubudala, kudingeka asingathe ngokucophelela ukuvulwa: ukususa izinsalela usimende, ukhonkolo semfene, kamuva kuzovimbela ukufakwa.
Ukuze ufake uzimele umnyango isidlulile ngokushesha, kudingeka ukulungiselela kusengaphambili wonke amathuluzi adingekayo kanye izinto ususondele. Okubaluleke kakhulu, kudingeka ube yimpumelelo - sokuprakthiza ezinhle kagesi. Udinga Thenga kakhulu sokuzivivinya zibe yizinkuni, okumele luhambisane screw ubukhulu namabhola pobeditovymi kabani ubukhulu kufanele sibe ngaphezu labo ezakhelwe izinkuni. Kwathatha nezikulufi eziyisithupha self-evunyelwe. Ukuze ulwelwesi kudingeka izingxenye plywood nezinkuni. Nozzle ku sokuprakthiza liyadingeka for screwing e ngezikulufo. Futhi into wokugcina uzodinga ukusebenza - isakhiwo ezingeni.
Manje usungaqala inqubo. Faka umnyango Uhlaka iqala sokuprakthiza sokuprakthiza izimbobo ezintathu imigoqo eceleni. Lapha kumelwe siqaphele kakhulu ukuba Gubha wokwakha umphetho. Ukuze cap nezikulufi kungukuthi peeping, isidingo countersink ukwenza izimbobo ezincane ngesimo asemigodini.
Uma konke lokhu kwenziwa, ungakwazi ukufaka ku jamb umnyango. Ngosizo ezingeni umoya udinga wakufaka izindiza mpo futhi enezingqimba, ngenkathi usebenzisa izingcezu ukulungele plywood nezinkuni. Through the izimbobo yamba phambi kubalulekile ukuphawula indawo odongeni lapho imbobo uzobe yamba. Khona-ke bayamba isidingo pobeditovym ukwenza izimbobo eziyisithupha kulezi zindawo ibhalwe dowels ke amaphuzu kubo. Inhloko sokuprakthiza is kuvikelwe for screwing ngezikulufo. Manje wena kokufaka Uhlaka umnyango ngasemnyango, ngezikulufo afakwa izimbobo. Isikulufa adinga nakuba kungaze kube yinxenye. Isakhiwo ezingeni ezidingekayo ukuze uqondanise ngokuphelele ukunemba ukufakwa ifremu umnyango, bese ngezikulufo kungenziwa screwed cishe kuze kube sekupheleni.
Eduze kwendawo lapho ngezikulufo screwed e, kubalulekile ukuba buyela yizinkuni. Lokhu kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi ibhokisi wayengakwazi ukuthola ukuma kuvulwa. Kungaleso sikhathi kuphela lapho screwed ngokuphelele ngezikulufo. Esizidlula nakho kusetshenziswa ezingeni.
Ngemva ukufakwa ifremu umnyango sekuphelile, kuzomele udale i umphetho inhlangano. Ngenxa yalesi ukwahlukanisa ezithambile igcwalisa isikhala phakathi ukuvulwa kanye bezinhlamvu ayigcwalisa Foam. ungqimba yalo kufanele ibe cishe amathathu kwangu ukujula ukusuka emaceleni kwe-ibhokisi. Uma umnyango owodwa iphiko, uMbhalo eyodwa kwanele.
Uma aboshelwe umnyango izibambo nezinamathiselo, hlola ukusebenza kwezibambo zesihluthulelo. Ukuvula nokuvala kubo okufanele kwenzeke ngaphandle Jamming noma umzamo omkhulu. Kufanele futhi kube nesiciniseko sekutsi akekho iminonjana iminyango ogibele Foam. Uma kukhona atholakala kubalulekile ngokushesha sithathe izinyathelo ezidingekile, njengoba Foam fresh Kusengenzeka ukususa kuphela futhi Foam lukhuni kungenziwa kuphela isuswe ngu isinyathelo mechanical, okuyinto okungenzeka bahlukunyezwe ngemuva ukubonakala iqabunga umnyango.
Ngakho abaningi ukhathazekile ngenkinga, kanjani ukufaka kahle umnyango. Kumele kuqashelwe ukuthi kusukela kalula futhi olunzulu ukufinyelela lolu daba, kanye nokuhambisana ne imiyalelo ezidingekayo futhi kuncike empilweni lendwangu.
Wamafutha for eczema ezandleni: zokuzelapha kuyingozi!